Arsenal, Man U, Man City & Liverpool oo badiyey (ciyaarihii todobaadkan ee EPL) – SBC
Arsenal, Man U, Man City & Liverpool oo badiyey (ciyaarihii todobaadkan ee EPL)
Posted by editor on November 21, 2011 Comments
Todobaadkan sabtidii iyo axadii waxaa la cayaaray kulamadii wareega 12-aad ee Horyaalka English Premier League-ga oo ah horyaalka dunida ugu xiisaha badan uguna daawashada badan.
Kooxaha tunka waa weyn marka laga reebo Chelsea oo gurigeeda lagu tumay way wada badiyeen waxaana wali 12 kulan oo isku xigta la soo qaban la yahay kooxda maalgalinta xoogan lagu sameeyey ee lacagtu dhistey, waxaa sidoo kale todobaadkan markii ugu horeysay dhulka la dhigay dhinaceeda kooxda Newcastle oo jawi aad u sareeya ku socotey oo aan dhinaceeda dhulka la dhigin11 ciyaarood oo isku xiga.
Chelsea oo lagu garaacay gurigeeda lana kulantey guuldaradii 3-aad afar kulan oo isku xiga
Ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara qaranka England & kooxda Liverpool Glen Johnson ayaa gool caaqibo leh oo uu dhaliyey daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaar adag oo ka dhacdey guriga Chelsea wuxuu u suurtagaliyay kooxda martida ah ee Liverpool inay qaadato sadexdii dhibcood ee loo cararay.
Chelsea oo dooneysay in isku adkeyso kulankan ayaa daqiiqadii 33-aad waxaa gool ku yimid qalad dhanka daafaca oo uu galey ciyaaryahanka Jon Obi Mike qaladkaasi uu ka faa’ideystey kubad qaabeeyaha khadka dhexe Adam oo uu kubadii u sii gudbiyey Suarez isago isna u sii baasay Bellamy, halka Bellamy uu u sii dhigay kubadii Maxi oo isaguna si aan leexleexad laheyn kubadii u hareerv mariyey goolhayaha kooxda Chelsea Peter Cech.
Laakiin qaybtii labaad ee la isku soo laabtey ayaa weeraryahanka Daniel Sturridge oo badal lagu soo galiyey ciyaarta wuxuu gool ka farxiyey taageerayaasha Chelsea & tababare Villa-B
Ciyaarta oo la isku mari waayey, isla markaana labda kooxood isku daaleen badal kala duwan la sameeyey ayaa afartii daqiiqo ee ugu dambeysay waxaa kubad uu la dhexmarey ciyaaryahanada Chelsea shabaqa la tiigsadey Glen Johnson.
Guuldarada Chelsea kulankan ka soo gaartey waxay ka dhigan tahay tii sadexaad afar kulan oo isku xigta oo ay ciyaartey Premier League, waxaana ay badisay 2 kulan oo kaliya lixdii kulan ee ugu dambeysey.
Sidoo kale waa markii ugu horeysay ciyaaro isku xiga gurigeeda lagaga badiyo tan iyo sanadkii 2001/2002 xili ciyaaraadkii EPL.
Tababaraha Chelsea Villas-Boas oo la filayey in uu maanta ku bilaabo ciyaartan xidigii hore ee kooxda Liverpool lagala soo wareegey lacagtii ugu badneyd ee taariikhda Britain ciyaaryahan lagu soo gato, sabab aan la ogeyn ayuu keydka ugu hayey ilaa iyo daqiqiadii 84-aad.
Chelsea waxay kala kulantey guuldaro xili ciyaareedkan kooxaha waa weyn sida Manchester United, Arsenal iyo shaley oo Liverpool karaashtey, waxayna 12 dhibcood ka hooseysay kooxda hogaanka horyaalka haysa ee Manchester City, waxaana taasi ka dhigan tahay in ay sii libdhayso rajadii ay ka qabtey ku guuleysiga koobka Premier League-ga sanadkan.
Waa guuldarooyinkii ugu xumaa ama ugu horeeyey ee kooxda la soo gudboonada tan iyo sanadkii 2003-dii xiligaasi oo uu kooxda iibsadey hantiilaha u dhashay dalka Ruushka ee lagu magacaabo Roman Abramovich.
Sturridge (Daqiiqadii 55-aad)
Maxi (Daqiiqadii 33-aad)
Johnson (Daqiiqadii 87-aad)
Garoonka lagu ciyaarayey ee Stamford bridge waxaa soo xaadiray 41,820 qof.
Man City oo sii dheeraysatey hogaanka & Newcastle oo laga jabiyey laga badin la’aantii
Manchester City ayaa xajisatey hogaaminta horyaalka Premier League-ga ka dib markii ay gurigeeda Etihad Stadium ay ku martigalisey kooxda Newcastle oo dhadhamisay guuldaradii ugu horeysay tan iyo bilowgii xili ciyeereedka horyaalka Premier League-ga.
Laba gool oo ahaa gool ku laad oo ay qaybtii hore & qaybtii labaad ay kala dhaliyeen Mario Balotelli & Sergio Aguero & gool kale oo uu ku sadexeeyey laacibka daafaca ka ciyaara ee Micah Richards ayaa sadex gool iyo sadex dhibcood siiyey kooxda martida lahaa ee Man City.
Inkastoo Newcastle ay la timid gool uu dhaliyey daqiiqadii 89-aad ciyaaryahanka Dan Gosling oo badal lagu soo galiyey daqiiqadii 79-aad, hadana waxay iska qasaarisey fursado badan oo ay ku dhalin kartey goolal.
Goolasha Man City
Balotelli (gool ku laad daqiiqadii 41-aad)
Richards (Daqiiqadii 44-aad)
Augero (Gool ku laad daqiiqadii 72-aad)
Gosling (Daqiiqadii 89-aad)
Garoonka lagu kulmey ee Etihad Stadium waxaa soo xaadirey 47,408 qof.
Arsenal oo la qaybsatey tababare Arsene Wenger guushiisii 200-aad ee kooxda Gunners
Laacibka ifaya ee kooxda Arsenal Robin van Persie ayaa goolal uu dhaliyey oo isku geyn ka dhigan 31 gool oo uu dhaliyey sanadkan 2011-ka waxay ku riixdey kooxda Arsenal guushii 10-aad 12 ciyaarood oo isku xiga.
Arsenal oo marti u aheyd kooxda Norwich City oo sanadkan ku cusub horyaalka Premier League, waxaa lagaga naxsadey gool uu dhaliyey Steve Morison oo xoog uu kaga dafey kubada daafaca Arsenal sanadkan cusub ee Per Mertesacker.
Laakiin 10 daqiiqo ka dib goolkaasi soo dhaweynta ee Arsenal laga dhaliyey ciyaaryahan Van Persie ayaa kubad cross ah oo uu soo dhigey xidiga garabka ka ciyaara Theo Walcott wuxuu si xirfad leh u dhexdhigay shabaqada kooxda martida loo ahaa ee Norwich.
Qaybtii koowaad ee ciyaarta waxaa lagu kala nastey 1-1 waxaase arinkaasi aanay u cuntamin tababare Arsene Wenger oo isagoo madaxa ruxaya gadaalna u soo eegaya garoonka kana careysan fursadaha tirada badan ee ay iska khasaariyeen ciyaartoydiisii garoonka ka baxay si uu ula soo hadlo waqtiga nasiinada askartiisa, waxaana sida muuqatey canaan uu dusha uga soo ridey weeraryahanadiisa gaar ahaan weeraryahanka reer Ivory Coast Yao Gervinho oo tiro ka dhawr jeer fursado badan iska dayacay.
Qaybtii labaad ee ciyaarta waxaa dardar culus la soo galey garoonka weeraryahanada iyo ciyaartoyda khadka dhexe ee Arsenal iyadoo 12 daqiiqo markii ciyaartu sooctey Van Persie sidii caadada aheyd kubad si xirfad leh uu ugu soo dhigey kubad qaabeeyaha reer Cameron Alex Song uu xaga sare ka mariyey goolhayaha Norwich John Ruddy, waxaana sidaasi ay ku noqotey ciyaartii 1-2 oo ay ku hogaaminayso Arsenal.
Robin van Persie labada gool ee uu ku dhaliyey kulankaasi waxay ka dhigtey in uu barbar istaago labada laacib ee kaliya ee in ka badan 30 gool mudo sanad ah ama12 bilood oo isku xigta( Calendar year) ku dhaliyey goolal Premier League-ga.
Labada laaciib ee rikoorkaasi haystey ayaa kala ahaa Alan Shearer oo sanadkii 1995-kii 36 gool dhaliyey iyo Thierry Henry oo 34 dhaliyey sanadkii 2004.
Sidoo kale waxay u tahay Robin van Persie kulankisii shanaad oo uu 10 gool dhaliyey.
Guushan Arsenal ay ka gaartey kulankaasi martida (away-ga) ay aheyd waxay la qabsadeen ciyaartoydu macalinkooda Aresen Wenger guushiisii 200-aad ee kooxda Arsenal mudadii 15-ka sano aheyd ee uu macalinka u ahaa.
Morison (Daqiiqadii 16-aad)
Van Persie (Daqiiqadii 26-aad)
Van Persie (Daqiiqadii 59-aad)
Garoonka kooxda Norwich City ee lagu ciyaarayey ee lagu magacaabo Carrow Road waxaas oo xaadiray 26,801 qof.
Man United oo guul gool kala kaliya kala carowdey garoonka The Liberty Stadium
Daqiiqadsii 11-aad gool uu dhaliyey weeraryahanka reer Mexico Javier Hernandez ayaa siiyey guul cago adag aan ku taagneyn kooxda Manchester United ee martida u aheyd kooxda Swansea oo sanadkan ku cusub Premier League.
Guuldarani waa tii ugu horeysay ee kooxda Swansea ka qabsata gurigeeda Liberty Stadium tan iyo xili ciyaareedkan.
Laakiin goolka ay ku hogaaminaysay ciyaarta Man United raaxo kuma aheyn oo waxaa had iyo goor shaqo badan u tiil goolhaye David De Gea, waxaana fursadii ugu fiicneyd iska cunay ciyaaryahanka Sinclair mudo laba goor ah oo marna uu lugta la waayey kubad shabaqu banaan yahay iyo mid kale oo uu banaanka u saarey.
Manchester United waa kulankii shanaad oo isku xiga oo aan wax gool ah shabaqeeda la taabsin, sidoo kale waxay ka dhigan tahay Javier Hernandez in uu wali u hamuun qabo in uu dhaliyo goolasha kooxdiisa ay martida tahay, iyadoo goolkaasi guusha siiyey Man United uu yahay kiisii 13-aad oo uu ku dhaliyo ciyaar ka baxsan garoonka Old Trafford.
Kulamada kale ee Sabti & Axad
Stoke City 2-3 QPR
Wigan 3-3 Blackburn Rovers
Isniinta habeenimada waxaa kulmi doona
Tottenham Hotspur oo gurigeeda ku soo dhaweynaysa kooxda Aston Vila